Tribendimidine CAS 115103-15-6 Qiime, Badeecad ka timid Bolise
[Magaca Kiimikada] N, N-Di- [4- (1-dimethylaminoethylimine) phenyl] -1,4-xylene imine
[Foomka Molecular] C28H32N6
[Miisaanka jirka] 452.603
[Adeegsiga] Daawooyinka Xayawaanka
[Heerka Fasalka] Fasalka Caafimaadka
Ku saabsan Tribendimidine
Tribendimidine waa daawooyin goynta goynta mindhicirka ee ballaaran, oo loo isticmaalo daaweynta hookworm hookworm (gaar ahaan Ameerika), infekshanka ascaris.
Tribendimidine waa wakiil ballaaran oo daawada anthelmintic ah oo lagu horumariyo Shiinaha, Machadka Qaranka ee Cudurrada Faafida ee Shanghai. Tijaabooyinka caafimaad, waxay si aad ah waxtar ugu laheyd daaweynta ankylostomiasis, ascariasis iyo enterobiasis. Si kastaba ha noqotee, daraasaadka xayawaanku waxay soo jeedinayaan inaysan waxtar lahayn daaweynta Schistosoma mansoni ama Fasciola hepatica disease. Daawada ayaa sidoo kale sifiican ugu shaqeysay tijaabooyinka ka dhanka ah opisthorchiasis, iyagoo daweeyay qiyaastii 70% kiisaska.